induction annealing သောကြေးဝါပြွန်, ပိုက်, annealing သံမဏိဘား
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction Annealing / သော induction Annealing
အမျိုးအစား: induction Annealing Tags: annealing, ကြေးဝါသော induction annealing, ကြေးဝါပြွန် annealing, induction annealing, annealing ဖြစ်စဉ်ကို, ကြေးဝါဝါယာကြိုး annealing, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း annealing, သော induction annealing, သော့ induction annealing ကြေးဝါ, induction annealing ဖြစ်စဉ်ကို
သော induction annealing ကဘာလဲ?
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသားသိသိသာသာအပြောင်းအလဲနဲ့ခံပြီသတ္တုတွင်စတင်။ induction annealing , ခိုင်မာသောလျော့ကျစေပါတယ်ကျဇယားတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းရေးဖိစီးသက်သာ။ full-ခန္ဓာကိုယ် annealing ပြီးပြည့်စုံ workpiece annealed သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချုပ်ရိုး annealing ( ပို. တိတိကျကျချုပ်ရိုးပုံမှန်အဖြစ်လူသိများ) နှင့်တကွ, ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှသာအပူဒဏ်ဇုန်ကုသနေပါတယ်။
သော့ induction annealing သောကြေးဝါ Bari
induction annealing နှင့်ပုံမှန် မြန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဒေသခံအပူ, တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လွယ်ကူသော In-line ကိုပေါင်းစည်းမှုကယ်တင်တတ်၏။ induction ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ, သတ်မှတ်ချက်များတောင်းဖို့တစ်ဦးချင်းစီ workpieces ဆကျဆံတယျ။
induction annealing နှင့်ပုံမှန်ကျယ်ပြန့်ပြွန်နှင့်ပိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစဝါယာကြိုး, သံမဏိ strips တွေ, ဓါးဓါးသွားနှင့်ကြေးနီ Tube anneals ။ တကယ်တော့သော induction နီးပါးဆို annealing task အတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
များအတွက်သင့်လျော်သော သော induction annealing ပစ္စည်းကိရိယာများ DW-MF, DW-HF နှင့် DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF သော induction အပူပေးစက်အပါအဝငျ။
induction အတူ Annealing တိုက်တေနီယမ်စွဲစေ
induction Annealing စော Blade
induction Annealing အခွံမာသီး
ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် induction Annealing ဝါယာကြိုး